လူငယ်နှင့် အချိန်အသုံးချမှု - Myanmar Network
Posted by Myo Myint Kyaw on June 22, 2012 at 3:38 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
လူဘ၀သက်တမ်း တစ်လျှောက်မှာ အကောင်းဆုံးတွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှာကတော့ လူငယ်လို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ လူငယ်လို့ ပါးစပ်ကနေ အော်လိုက်ရရင်ကို တော်တော်လေး ခွန်အားတွေ ပြည့်လာသလိုပဲ။ လူငယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကိုတော့ အလွန်တန်ဖိုးထားတယ်။ ရှေ့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ လူငယ်ဘ၀ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပုံလေးတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက်တော့လေ့လာမိတယ်။ တကယ်ကိုထွန်းပေါက် အောင်မြင်သွားကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာ အခက်အခဲ ဒုက္ခဆိုတာတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရင်ဆိုင်ဖြတ် သန်းခဲ့ကြ တယ်ဆိုတာလေးတော့ တွေ့ရပါ တယ်။ ဒါလေးတွေကို သာဓကပြုပြီး ယနေ့လူငယ်တွေ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်မှာ အချိန်တွေကို အလဟသတ် ကုန်ဆုံးနေတာတွေ့ ရလို့ အကြောင်းပြုပြီးရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘ၀ဆိုတာကိုအချိန်နဲ့တည်ဆောက်ထားတယ် လို့ဆရာပီမိုးနင်း စာအုပ်တွေမှာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရာတွေထဲမှာ အချိန်ဆိုတာကတော့ ဘာနဲ့မှာ အစားပြန်ထိုးလို့မရတဲ့ အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလူငယ် လေးတွေ သိပြီးသားပါ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေအတွက် အကျိုးရှိရှိ အသုံးချကြဖို့ ပြောခဲ့တဲ့ စာအုပ်ပေါင်း တွေလည်း ထပ်နေပါပြီ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အကျိုးမရှိတဲ့ စကားတွေပြောပြီး အချိန်ကုန်နေကြမယ့်အ စား တစ်ခုခုကိုအာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ကိုင်ကြမယ် ဆိုရင်ဖြင့် အဖိုးတန်လူငယ်တွေ မြန်မာပြည်မှာ အမြောက်အများ ထွက်လာမှာပါ။
ဘ၀ဆိုတာကတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘ၀အကျိုးပေးနဲ့ကိုယ် ဆင်းရဲတာရှိသလို ချမ်းသာတာလည်း ရှိကြမယ်။ ဘယ်လိုဘ၀မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဖြစ်ချင်ရာကို ဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဓိကအကျဆုံးကတော့ ကိုယ့်စိတ်ပါ။ ဘ၀အကျိုးပေးနုံချာလို့ လောကဓံဆိုးတွေရင်ဆိုင်ကြရတယ်။ လွတ်လပ်မှုမရှိလို့ လုပ်ချင် ရာလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုး အနေအထားမှာပဲ ရှိနေပါစေ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အားလုံးကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရဲတဲ့သတ္တိတစ်ခုပဲလိုပါတယ်။ ဘ၀အခြေမွဲလို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ရှိနေကြမယ်ဆို ရင် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ မော်ကွန်တင် သမ္မတကြီး အေဗရာ ဟမ်လင်ကွန်း အကြောင်းလေး လေ့လာဖတ်ရှု့ကြည့်ကြစမ်းပါ။ ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ မွဲလိုက်တဲ့ မောင်လို့တောင်ဆိုရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒိပ်ဒိပ်ကြဲနာမည်ကြီးသွားတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ရတာ သူ့ရဲ့ပြင်းပြ တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ကျိုးစားမှုတွေကြောင့်ပဲ မဟုတ်လား။ သူ့မှာစာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်ခွင့်ရဖို့ ဘယ်လောက်ထိ ခက်ခဲလဲ သူ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိကြရမှာပါ။ အလင်းရောင်အား မှိန်တုတ်တုတ် သာပေးနိုင်တဲ့ မီးလင်းဖိုအဘေးမှာ စာတွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လေးစားအားကျ ရတဲ့ သမ္မတကြီး တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ ရတာပါ။
ယနေ့လူငယ်တွေမှာ အခြေခံပညာ မသင်ရတဲ့သူဆိုတာတော့ခတ်ရှားရှားဖြစ်နေပါပြီ။ လေ့လာ မယ် ဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင် စာအုပ်စာတန်းတွေကလည်း တစ်ပုံတစ်ခေါင်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးလုပ် ကြကိုင်ကြဖို့တော့ အချိန်မပေးနိုင်ကြပဲ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့် တန်ဖိုးမရှိစ ကားတွေ ပြောပြီးအချိန် ကုန်နေကြတယ်။ ဘ၀ဆိုတာကိုလွယ်လွယ်ကလေးထင်ပြီး လွယ် လွယ်ဖြတ်သန်းကြလို့ကတော့ လွယ်လွယ် ကလေးပဲပြီးသွားမှာပဲလေ။ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာက လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် လေ့လာစရာတွေက တစ်ပုံတစ် ခေါင်းနဲ့ မကုန်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလောက် ခက်ခက်ခဲခဲကြီးလဲမရှိတော့ပါဘူး။ ရှေ့လူတို့က စားသုံးရန်အသင့်စီမံပေးထားတာတွေကိုပဲ လေ့လာကြည့်ကြပါအုံး လို့တိုက်တွန်းချင်တာပါ။ ခေတ်လူငယ်တွေ ခေတ်လူ ငယ်တွေဆိုပြီး အပုတ်ချ ပြောဆိုနေသံတွေကို လူငယ်တွေကြားနေကြမှာပါ။ ပြောလည်းပြောချင်စရာတွေက ဖြစ်နေတာဆိုတော့ ပြောတဲ့ လူတွေမှာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ပဲယုံကြည်တယ်။
ဒီလိုမျိုး ဘ၀ကိုအကျိုးရှိရှိ ရင်ဆိုင်နေကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေအများအပြားရှိပါတယ်။ ခေတ်နဲ့ စနစ်နဲ့ တိုးတက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်မှာ အပျော်အပါးတွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေကြတဲ့လူငယ် တွေကလည်း တော်တော်များများရှိနေတယ်လေ။ မိဘရဲ့အရိပ်အောက်မှာတော့ လုပ်ချင်ရာ လုပ်လို့ ရကြပေမယ့် ရှေ့ဖြတ်သန်းရမယ့် ဘ၀က ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိရှည်ကြအုံး မယ်ဆိုတာ သိရတာမဟုတ်ဘူး။ ပညာသင်ရမယ့်အချိန်မှာ ပညာ သင် အလုပ်လုပ်ရမယ့်အ အချိန်မှာ အလုပ်လုပ်ကြမှသာလျှင် နောင်ရေး အတွက် စိတ်အေးရမယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တော့ လူငယ်တွေ ကို တရားစကား လေးနည်းနည်း ထည့်ပြောချင်တယ်။ “ လုပ်တိုင်းမဖြစ် စိတ်မညစ်နဲ့” ဆိုတာလေး တော့ သတိထားကြပါ။ ကိုယ်တွေက ကျိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ ဖြစ်မလာဘူး လို့ စိတ်ဓာတ်ကျကုန်တဲ့ လူငယ်တွေလည်း ရှိတယ်။ ကျိုးစားဖို့က ကိုယ့်တာဝန် ပါ။ အချိန်တန်ရင် ကျိုးစားထားသမျှ အကျိုးပေးလာပါလိမ့်မယ်။
ဘကြီးတစ်ယောက်ကို ကန်တော့တိုင်း ဘကြီးပေးတဲ့ဆုက “ လုံလစိုက်၊ ၀ရိယထုတ်၊ ဖြစ်အောင် ကျိုးစား” လို့ ဘကြီးက အမြဲတမ်းဆုပေးလေ့ရှိတယ်။ တိုးတက်နေတဲ့ခေတ်မှာ တိုး တက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိုလိုချင်ရင် လိုချင်သလောက်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒွိဟတွေမများပဲ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေး ပြီး ဒိပ်ဒိပ်ကြဲပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်တ ကယ်ဝါသနာပါရာလမ်းကြောင်းကို အစွန်းစုံထိ ရေကုန် ရေခန်းလိုက်ကြစမ်းပါ။ ဘယ်ကိစ္စမဆို အခက်အခဲဆိုတာတော့ ရှိတတ်ပါတယ်။ အခက်အခဲဘယ် လောက်ပဲများနေနေ ရင်ဆိုင်ကျော် လွှားရဲတဲ့ သတ္တိတစ်ခုပဲလိုပါတယ်။ မြက်ပင်လေးတွေ ဆိုရင်နင်း သွားလိုက် ၊ စူးညှောင့်ခလုတ် နဲ့ တွေ့ ရင်ဖယ်ရှားပစ်လိုက် ၊ တားဆီးပ်ိတ်ပင်ထားပြီဆိုရင်တော့ တွန်းဖွင့်သွား လိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်တာပါ။ လူငယ်တိုင်းမှာ စိတ်ကူးယဉ်အိမ်ဆိုတာလေးတွေရှိတယ်လေ။ အဲဒီစိတ် ကူးယဉ်အိမ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေလို့မဖြစ်ဘူး။
စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်တွေ လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ ဆိုရင် ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးမဆိုရင်ဆိုင်မှ လက်တွေ့ဖြစ် လာမှာပါ။ အသက်ကြီးလာတဲ့ အချိန်ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာ ရပ်တည်နိုင်တယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် လူငယ်ဘ ၀မှာ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ ပဲဆိုင်တယ်။ အချိန်ကောင်း အခါကောင်းကို ကောင်းကောင်း အသုံးချကြပါလို့ ယနေ့ခေတ်လူငယ်များအားလုံးကို ဆန္ဒပြု တိုက်တွန်းခြင်းဖြင့်................။
လူဘ၀သကျတမျး တဈလြှောကျမှာ အကောငျးဆုံးတှကေိုလုပျဆောငျနိုငျမှာကတော့ လူငယျလို့ သတျမှတျ ထားတဲ့ အခြိနျပါပဲ။ လူငယျလို့ ပါးစပျကနေ အျောလိုကျရရငျကို တျောတျောလေး ခှနျအားတှေ ပွညျ့လာသလိုပဲ။ လူငယျဆိုတဲ့ ဂုဏျကိုတော့ အလှနျတနျဖိုးထားတယျ။ ရှဆေ့ောငျပုဂ်ဂိုလျကွီးတှရေဲ့ လူငယျဘ၀ ဖွတျသနျးခဲ့ကွပုံလေးတှကေိုလညျး တတျနိုငျသလောကျတော့လလေ့ာမိတယျ။ တကယျကိုထှနျးပေါကျ အောငျမွငျသှားကွတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတိုငျးဟာ အခကျအခဲ ဒုက်ခဆိုတာတှကေို ခကျခကျခဲခဲ ရငျဆိုငျဖွတျ သနျးခဲ့ကွ တယျဆိုတာလေးတော့ တှရေ့ပါ တယျ။ ဒါလေးတှကေို သာဓကပွုပွီး ယနလေူ့ငယျတှေ လကျဖကျရညျ ဆိုငျမှာ အခြိနျတှကေို အလဟသတျ ကုနျဆုံးနတောတှေ့ ရလို့ အကွောငျးပွုပွီးရေးသားဖျောပွခွငျးဖွဈပါတယျ။
ဘ၀ဆိုတာကိုအခြိနျနဲ့တညျဆောကျထားတယျ လို့ဆရာပီမိုးနငျး စာအုပျတှမှော တှခေဲ့ရတယျ။ တနျဖိုးရှိတဲ့ အရာတှထေဲမှာ အခြိနျဆိုတာကတော့ ဘာနဲ့မှာ အစားပွနျထိုးလို့မရတဲ့ အရာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကိုလူငယျ လေးတှေ သိပွီးသားပါ။ တနျဖိုးရှိတဲ့ အခြိနျတှအေတှကျ အကြိုးရှိရှိ အသုံးခကြွဖို့ ပွောခဲ့တဲ့ စာအုပျပေါငျး တှလေညျး ထပျနပေါပွီ။ လကျဖကျရညျဆိုငျမှာ အကြိုးမရှိတဲ့ စကားတှပွေောပွီး အခြိနျကုနျနကွေမယျ့အ စား တဈခုခုကိုအာရုံစိုကျပွီး လုပျကိုငျကွမယျ ဆိုရငျဖွငျ့ အဖိုးတနျလူငယျတှေ မွနျမာပွညျမှာ အမွောကျအမြား ထှကျလာမှာပါ။
ဘ၀ဆိုတာကတော့ အမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။ ကိုယျ့ဘ၀အကြိုးပေးနဲ့ကိုယျ ဆငျးရဲတာရှိသလို ခမျြးသာတာလညျး ရှိကွမယျ။ ဘယျလိုဘ၀မြိုးပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျဖွဈခငျြရာကို ဖွဈခှငျ့ရှိပါတယျ။ အဓိကအကဆြုံးကတော့ ကိုယျ့စိတျပါ။ ဘ၀အကြိုးပေးနုံခြာလို့ လောကဓံဆိုးတှရေငျဆိုငျကွရတယျ။ လှတျလပျမှုမရှိလို့ လုပျခငျြ ရာလုပျလို့မရဘူးဆိုတာတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဘယျလိုမြိုး အနအေထားမှာပဲ ရှိနပေါစေ ဖွဈခငျြတယျဆိုရငျ အားလုံးကိုရငျဆိုငျကြျောလှားရဲတဲ့သတ်တိတဈခုပဲလိုပါတယျ။ ဘ၀အခွမှေဲလို့ နိုငျငံတျောသမ်မတ မဖွဈနိုငျဘူးဆိုတဲ့ခံယူခကျြရှိနကွေမယျဆို ရငျ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ မျောကှနျတငျ သမ်မတကွီး အဗေရာ ဟမျလငျကှနျး အကွောငျးလေး လလေ့ာဖတျရှု့ကွညျ့ကွစမျးပါ။ ပွောကွမယျဆိုရငျတော့ မှဲလိုကျတဲ့ မောငျလို့တောငျဆိုရမှာပဲ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဒိပျဒိပျကွဲနာမညျကွီးသှားတဲ့အထိဖွဈသှားခဲ့ရတာ သူ့ရဲ့ပွငျးပွ တဲ့ ဆန်ဒနဲ့ ကြိုးစားမှုတှကွေောငျ့ပဲ မဟုတျလား။ သူ့မှာစာအုပျတဈအုပျကို ဖတျခှငျ့ရဖို့ ဘယျလောကျထိ ခကျခဲလဲ သူ့အကွောငျးကိုလလေ့ာကွညျ့ရငျသိကွရမှာပါ။ အလငျးရောငျအား မှိနျတုတျတုတျ သာပေးနိုငျတဲ့ မီးလငျးဖိုအဘေးမှာ စာတှကေို ဖတျရငျးနဲ့ တဈကမ်ဘာလုံးက လေးစားအားကြ ရတဲ့ သမ်မတကွီး တဈဦးဖွဈခဲ့ ရတာပါ။
ယနလေူ့ငယျတှမှော အခွခေံပညာ မသငျရတဲ့သူဆိုတာတော့ခတျရှားရှားဖွဈနပေါပွီ။ လလေ့ာ မယျ ဖတျရှုမယျဆိုရငျ စာအုပျစာတနျးတှကေလညျး တဈပုံတဈခေါငျးရှိပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးလုပျ ကွကိုငျကွဖို့တော့ အခြိနျမပေးနိုငျကွပဲ လကျဖကျရညျဆိုငျတှမှော ရုပျရှငျကွညျ့ တနျဖိုးမရှိစ ကားတှေ ပွောပွီးအခြိနျ ကုနျနကွေတယျ။ ဘ၀ဆိုတာကိုလှယျလှယျကလေးထငျပွီး လှယျ လှယျဖွတျသနျးကွလို့ကတော့ လှယျလှယျ ကလေးပဲပွီးသှားမှာပဲလေ။ ဒီနခေ့တျေကွီးမှာက လလေ့ာခငျြတယျဆိုရငျ လလေ့ာစရာတှကေ တဈပုံတဈ ခေါငျးနဲ့ မကုနျနိုငျပါဘူး။ ဒီလောကျ ခကျခကျခဲခဲကွီးလဲမရှိတော့ပါဘူး။ ရှလေူ့တို့က စားသုံးရနျအသငျ့စီမံပေးထားတာတှကေိုပဲ လလေ့ာကွညျ့ကွပါအုံး လို့တိုကျတှနျးခငျြတာပါ။ ခတျေလူငယျတှေ ခတျေလူ ငယျတှဆေိုပွီး အပုတျခြ ပွောဆိုနသေံတှကေို လူငယျတှကွေားနကွေမှာပါ။ ပွောလညျးပွောခငျြစရာတှကေ ဖွဈနတောဆိုတော့ ပွောတဲ့ လူတှမှော အပွဈမရှိဘူးလို့ ပဲယုံကွညျတယျ။
မိဘတိုငျးမှာ ကိုယျမှေးထားတဲ့သားသမီးတိုငျးအတှကျမြှျောလငျ့ခကျြထားကွတယျ။ ကိုယျမှေး ထားတဲ့ သားလေး၊ သမီးလေးကို သူမြားတှတေျောသလိုတျောစခေ့ငျြတယျ။ အဲဒီလိုမြိုးတှခြေိနျ ထိုးပွရငျလညျး လူငယျတှကေ လကျမခံခငျြကွဘူး။ဘယျသူမှားလဲစဉျးစားကွဖို့လိုတာပေါ့။ ဘ၀ဆိုတာက ကိုယျတိုငျရငျ ဆိုငျကွညျ့မှသိတာ။ ဘ၀ကိုတနျဖိုးရှိရှိဖွတျသနျးနကွေတဲ့လူငယျ လေးတှလေညျး တဈပုံတဈခေါငျးပါပဲ။ မိသားစုရဲ့ အခွအေနအေရ ကိုယျ့ဘ၀ကိုယျကွောငျးပွီး တိုးတကျမှု အောငျမွငျ မှုနောကျကိုလိုကျနကွေတဲ့ လူငယျလေးတှလေညျးရှိတယျ။ သူငယျခငျြး မိနျးခလေးထဲက လေးစားရလောကျတဲ့ သူငယျခငျြးတဈ ယောကျအကွောငျး အနညျးငယျ လောကျတော့ ပွောပွခငျြတယျ။
သူဆိုရငျ ဆယျတနျးအောငျပွီးကတညျးက အရောငျးစာရေးမလေး အဖွဈနဲ့ ပရိဘောဂဆိုငျ တဈဆိုငျမှာ အလုပျဝငျလုပျနခေဲ့တာပါ။ ဆယျတနျးမှာ အမှတျကောငျးကောငျးရခဲ့ပမေယျ့ ဂြီတီစီ တို့ ကှနျပြူတာတို့ ဆိုတာတှကေို တကျဖို့ အခှငျ့မသာဘူး။ငှကွေေးအခကျအခဲကွောငျ့လညျး ပါတာပေါ့။ အလုပျလုပျပွီး အဝေးသငျဘှဲ့ပဲ ရအောငျယူတော့မယျလို့ဆုံးဖွတျထားသူတဈ ယောကျပါ။ အခုအခွအေနမှောတော့ မနျနဂြောလေး အဆငျ့ထိဖွဈနပေါပွီ။ အလုပျအပျေါမှာ အာရုံစိုကျမှု၊ အလုပျကိုလေးစားမှုတို့ကွောငျ့ အလုပျရှငျကလကျမလှတျခငျြတော့ပါဘူး။ သူ့ကို ကွညျ့လိုကျရငျ အလုပျကအားတယျမရှိဘူး။ အရောငျးဆိုငျဆိုတော့ သူမြားတှေ အလုပျပိတျလို့ လညျး သူ့မှာမပိတျရဘူး။ တဈခါတဈရံသူငယျခငျြးတှကေ ဟိုနားသညျနားလညျဖို့ ပတျဖို့ချေါ ရငျတောငျ အလုပျမအားပါဘူးဆိုတဲ့ အသံပဲကွားနရေတယျ။ ကြူရှငျကိုလညျး ပိုကျဆံအပိုကုနျ မှာဆိုးတဲ့အတှကျမတကျဘူး။ ကြူရှငျတကျနကွေတဲ့ သူငယျခငျြးတှဆေီက စာကိုရအောငျယူ ပွီးကြိုးစားလာတာ အခုဆိုရငျ ဘှဲ့တောငျရခါနီးနပေါပွီ။ သူငယျခငျြးတှကေလညျး သူ့အ ကွောငျးသိနတေော့ တကျနိုငျသလောကျ ကူညီကွပါတယျ။
ဒီလိုမြိုး ဘ၀ကိုအကြိုးရှိရှိ ရငျဆိုငျနကွေတဲ့ လူငယျလေးတှအေမြားအပွားရှိပါတယျ။ ခတျေနဲ့ စနဈနဲ့ တိုးတကျနပေါတယျဆိုတဲ့ ခတျေမှာ အပြျောအပါးတှနေဲ့ အခြိနျကုနျနကွေတဲ့လူငယျ တှကေလညျး တျောတျောမြားမြားရှိနတေယျလေ။ မိဘရဲ့အရိပျအောကျမှာတော့ လုပျခငျြရာ လုပျလို့ ရကွပမေယျ့ ရှဖွေ့တျသနျးရမယျ့ ဘ၀က ဘယျလောကျအတိုငျးအတာထိရှညျကွအုံး မယျဆိုတာ သိရတာမဟုတျဘူး။ ပညာသငျရမယျ့အခြိနျမှာ ပညာ သငျ အလုပျလုပျရမယျ့အ အခြိနျမှာ အလုပျလုပျကွမှသာလြှငျ နောငျရေး အတှကျ စိတျအေးရမယျ။ ဒါနဲ့ ပတျသတျပွီး တော့ လူငယျတှေ ကို တရားစကား လေးနညျးနညျး ထညျ့ပွောခငျြတယျ။ “ လုပျတိုငျးမဖွဈ စိတျမညဈနဲ့” ဆိုတာလေး တော့ သတိထားကွပါ။ ကိုယျတှကေ ကြိုးစားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာမှ ဖွဈမလာဘူး လို့ စိတျဓာတျကကြုနျတဲ့ လူငယျတှလေညျး ရှိတယျ။ ကြိုးစားဖို့က ကိုယျ့တာဝနျ ပါ။ အခြိနျတနျရငျ ကြိုးစားထားသမြှ အကြိုးပေးလာပါလိမျ့မယျ။
ဘကွီးတဈယောကျကို ကနျတော့တိုငျး ဘကွီးပေးတဲ့ဆုက “ လုံလစိုကျ၊ ၀ရိယထုတျ၊ ဖွဈအောငျ ကြိုးစား” လို့ ဘကွီးက အမွဲတမျးဆုပေးလရှေိ့တယျ။ တိုးတကျနတေဲ့ခတျေမှာ တိုး တကျရာတိုးတကျကွောငျးကိုလိုခငျြရငျ လိုခငျြသလောကျရနိုငျပါတယျ။ ဒှိဟတှမေမြားပဲ လမျးကွောငျးတဈခုကိုရှေး ပွီး ဒိပျဒိပျကွဲပုဂ်ဂိုလျ တဈယောကျဖွဈအောငျ လုပျလို့ရပါတယျ။ ကိုယျတ ကယျဝါသနာပါရာလမျးကွောငျးကို အစှနျးစုံထိ ရကေုနျ ရခေနျးလိုကျကွစမျးပါ။ ဘယျကိစ်စမဆို အခကျအခဲဆိုတာတော့ ရှိတတျပါတယျ။ အခကျအခဲဘယျ လောကျပဲမြားနနေေ ရငျဆိုငျကြျော လှားရဲတဲ့ သတ်တိတဈခုပဲလိုပါတယျ။ မွကျပငျလေးတှေ ဆိုရငျနငျး သှားလိုကျ ၊ စူးညှောငျ့ခလုတျ နဲ့ တှေ့ ရငျဖယျရှားပဈလိုကျ ၊ တားဆီးပျိတျပငျထားပွီဆိုရငျတော့ တှနျးဖှငျ့သှား လိုကျပါလို့ တိုကျတှနျးခငျြတာပါ။ လူငယျတိုငျးမှာ စိတျကူးယဉျအိမျဆိုတာလေးတှရှေိတယျလေ။ အဲဒီစိတျ ကူးယဉျအိမျမကျတှေ အကောငျအထညျဖျောဖို့ လကျဖကျရညျဆိုငျမှာထိုငျနလေို့မဖွဈဘူး။
စိတျကူးယဉျအိမျမကျတှေ လကျတှဖွေ့ဈလာဖို့ ဆိုရငျ ဘယျလိုအခကျအခဲမြိုးမဆိုရငျဆိုငျမှ လကျတှဖွေ့ဈ လာမှာပါ။ အသကျကွီးလာတဲ့ အခြိနျဘယျလိုနရောမြိုးမှာ ရပျတညျနိုငျတယျ လို့ ဆုံးဖွတျဖို့အတှကျ လူငယျဘ ၀မှာ ဘယျလိုလုပျခဲ့တယျဆိုတာနဲ့ ပဲဆိုငျတယျ။ အခြိနျကောငျး အခါကောငျးကို ကောငျးကောငျး အသုံးခကြွပါလို့ ယနခေ့တျေလူငယျမြားအားလုံးကို ဆန်ဒပွု တိုကျတှနျးခွငျးဖွငျ့................။
Permalink Reply by Hnin Oo Wai on June 24, 2012 at 16:59
Permalink Reply by khaing on June 26, 2012 at 9:04
ဂုဏ်ယူပါတယ် မောင်လေး.. စာက အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်....
Permalink Reply by phyuphyumin on June 26, 2012 at 13:41
''time and tide wait for the man' is also known everybody but they can never obedient. So youth should be make with an effort usefully time.that why your article is guide for youth.
Permalink Reply by andrew abel on June 26, 2012 at 19:07
ကြိုးစားဖို့မေ့နေတာ ကိုသတိပေးလိုက်သလိုပါဘဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Htoo on June 27, 2012 at 12:14
အသိ သတိ ၀င်အောင်ရေးသားထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ။ နောင်လည်းလူငယ်တွေအတွက် အကျိုးရှိစေမဲ့ အခုလိုစာမျိုးထပ်ပြီး share စေချင်ပါတယ်။
Permalink Reply by 0n3gwf289uac2 on June 27, 2012 at 12:36
Thank for knowing,Ko Myo Myint Kyaw!Your mind is great.
Permalink Reply by Peaceangel on June 27, 2012 at 22:07
Good article, bro!!
Permalink Reply by saw su thet wai on June 28, 2012 at 8:36
Permalink Reply by kee maang hning pai on June 28, 2012 at 10:06
ဟုတ် အရမ်းကောင်းပါတယ်...........ကြိုက်လို့ ကူးယူသွားပါတယ်။
Permalink Reply by moekyaw on June 28, 2012 at 10:16
ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ ဒီလိုပညာပေးလေးတွေများများတင်ပေးပါဦး၊
Permalink Reply by 0qdx12ebmqg8k on June 28, 2012 at 11:06
Permalink Reply by Htay Htay Aung on June 30, 2012 at 14:11